Yintoni oyenzayo ukuba ngabaLebhanki bakho beLebhanki abaSebenzisanga okanye abaPhathi
Ngaba uke wathatha iklasi yebhare kwaye unabalingani beebhanki abangazange benze isabelo sabo somsebenzi, baqhekeza izixhobo , okanye bengayi kusebenza kunye nawe? Le meko ingaba nzima kakhulu, kodwa kukho amanyathelo onokuthatha ukuze wenze izinto zibe ngcono.
Thetha kubalingani bakho beLebhu
Oku kunokuba nzima kunokuba kuvelele, ukuba ingxaki yakho kukuba wena kunye nabalingani bakho beebhodi abathethi ulwimi olufanayo (oluqhelekileyo kwisayensi kunye nobunjineli ), kodwa unokuphucula ubuhlobo bakho bokusebenza kunye nabalingani bakho bebhanki ukuba unako ba cacise oko kukukhathazayo.
Kwakhona, kufuneka uchaze oko ungathanda ukuba benze oko uvakalelwa kukuba kuya kwenza izinto zibe ngcono. Yilungele ukunciphisa, kuba iqabane lakho labasebenzi lingathanda ukuba wenze utshintsho oluthile, naye.
Gcinani engqondweni, wena kunye nomlingane wakho unokuvela kwiinkcubeko ezahlukeneyo, nokuba uvela kwilizwe elinye. Gwema ukukhawuleza okanye "ulungele" kuba kunethuba elihle lokuba awuzukufumana umyalezo wakho ngaphesheya. Ukuba ulwimi luyingxaki, funa umtoliki okanye udwebe imifanekiso, ukuba kuyimfuneko.
Ukuba omnye okanye Bobabili Awufuni Ukuba Khona
Umsebenzi usenokwenziwa. Ukuba uyazi ukuba iqabane lakho aliyi kwenza, kodwa ibanga lakho okanye umsebenzi wakho uphambili, kufuneka uvume ukuba uza kwenza wonke umsebenzi. Ngoku, unokwenza uqiniseke ukuba kubonakala ukuba iqabane lakho lisala. Ngakolunye uhlangothi, ukuba nonke unqabile ukwenza umsebenzi, kunengqiqo ukulungiselela ilungiselelo. Unokufumanisa ukuba usebenze ngcono xa uvuma ukuba uyayithiya loo msebenzi.
Ukuthanda kodwa Akunakwenzeka
Ukuba unomlingane weebra ozimisele ukukunceda, kodwa engenakuqonda okanye klutzy , zama ukufumana imisebenzi engenakulimala evumela iqabane ukuba ithathe inxaxheba ngaphandle kokulimaza idatha yakho okanye impilo yakho. Buza igalelo, vumela iqabane lirekhode idatha kwaye uzame ukuphepha ukunyuka kwizwane.
Ukuba umlingani ongenakuqhawula isicwangciso sokusisigxina kwindawo yakho, kuyona nto inomdla wokubaqeqesha.
Qalisa ngemisebenzi elula, uchaze ngokucacileyo amanyathelo, izizathu zezenzo ezithile, kunye neziphumo ezifunwayo. Yiba nobungane kwaye uncedo, ungadli. Ukuba uphumelele emsebenzini wakho, uza kufumana umhlobo obalulekileyo ebhodini kwaye mhlawumbi nomhlobo.
Kukho Igazi Elibi Phakathi Kwenu
Mhlawumbi wena kunye neqabane lakho lomlingani ube neengxoxo okanye kukho imbali edlulileyo. Mhlawumbi awukuthandi omnye nomnye. Ngelishwa, akusoloko kunokwenzeka ukubaleka kuloo meko. Unokucela umphathi wakho ukuba abuyele omnye okanye bobabini, kodwa uya kubeka umngcipheko wokufumana udumo olunzima ukusebenzisana nalo. Ukuba unquma ukucela utshintsho, mhlawumbi kungcono ukuchaza isizathu esithile sesicelo. Ukuba ngokuqinisekileyo kufuneka usebenzisane kunye, zama ukubeka imida ekunciphiseni ukuba ufanele usebenze kangakanani. Yenza okulindelweyo kucace ukuze bobabini unokwenza umsebenzi kwaye uhambe.
Thatha kwiNqanaba elilandelayo
Kungcono ukuzama ukuphumeza iingxaki kubalingani bakho bebhanti kunokufuna uncedo kumfundisi okanye kumphathi. Nangona kunjalo, unokufuna uncedo okanye iingcebiso kumntu ophakamileyo. Oku kungenjalo xa uqaphela ukuba awukwazi ukuhlangabezana nomhla wokugqibela okanye uzalise isabelo ngaphandle kwexesha okanye uguqula umsebenzi onamandla.
Ukuba unquma ukuthetha nomntu malunga neengxaki zakho, yibeke imeko ngokuzinzileyo nangenanto. Unenkinga; ufuna uncedo ukufumana isisombululo. Oku kunokuba nzima, kodwa kuyisakhono esibalulekileyo ukuqonda.
Ukuzinononga kwenza ugqibelele
Unenkathazo kunye nabalingani bebhabhi beza nommandla. Izakhono zentlalo onokukwazi ukujongana nabalingani bebhanki ziya kukunceda, nokuba uthabatha kuphela iklasi yeebra enye okanye wenza umsebenzi wobugcisa . Kungakhathaliseki ukuba wenzani, kuya kufuneka ufunde ukusebenzisana kakuhle nabanye, kuquka abantu abangenakukwazi, abanesilumko okanye abafuni ukusebenzisana nawe. Ukuba wenza umsebenzi wezesayensi, kufuneka uqaphele kwaye uyamkela uya kuba ilungu leqela.
Ummiselo Umzekelo Ingxaki
Inkulumo kaEmm Watson Watson ka-2014 malunga nokulingana ngokwesini
Ukuwa kweMing Dynasty eChina, ngo-1644
I-Scripps College Admissions Facts
Ukunquma ukuphazamiseka kwezandla kwiNdoda kunye noMfazi woMdlalo weGolf
Ukucacisa iifayile zeNkcubeko kwiBeastly in the Public